17 ka mid ah eedeysanayaasha fadeexadda NYS oo aan bixin lacago damiin ah – The Voice of Northeastern Kenya
17 ka mid ah eedeysanayaasha fadeexadda NYS oo aan bixin lacago damiin ah
Star FM July 9, 2018
Ilaa iyo hadda 17 qof oo ka mid ah eedeysanayaasha lala xiriiriyay fadeexadii waaxda qaran ee adeega dhalinyarada ee NYS looga lunsaday 9 bilyan oo shilin ayaanan bixin lacago damiin ah oo lagu siidayn lahaa.
Maxkamada sare ee dalka ayaa maalmo ka hor in ka badan 40 eedeysanayaal ah ku amartay inay bixiyaan min 5 milyan oo shilin ama xabsiyada lagu sii hayo.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ilaa iyo hadda 30 qof oo eedeysanayaal ah , xilal sar sarana haya ay bixiyeen lacagtaasi .
Bishii hore ayay ahayd markii amarkan uu ka soo baxay garsoore Hedwig Ong’udi .
Baaritaanada la xiriira dhaqaalaha la sheegay in laga dhacay waaxda qaran ee adeega dhalinyarada ee NYS iyo maxkamadeynta eedeysanayaasha ayaa waxaa sara uu sii qaaday xaqiijinta halka ay ka keeneen lacagaha ay isku furanayaan.
Agaasimaha waaxda dacwad oogista ee dalka Nuurdiin Xaaji ayaa maalmo ka hor amray in waaxda dambi barista ee dalka ay xaqiijiso in eedeysanayaasha aysan damiin lacageed ka dhigan dhaqaale ay ka faaiideen lacagta loo haysto inay lunsadeen.
Eedeysanayaasha bixiyay lacagihi damiinka ahaa ee maxkamada ay amartay ayaa waxaa ka mid ah xoghayihii hore ee wasaaradda adeega dadweynaha Lillian Omolo, agaasimihii hore ee NYS ,Richard Ndubai, ganacsade lagu magacaabo Peter Kimani iyo sarakiil kale.
← DHAGEYSO Barnaamijka Madasha, Ganacsiga 09-07-2018
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo aqalka madaxtooyada ku soo dhaweeyay dhigiisa Switzerland Alain Berset →